Mọnde 26 Eprel 2021
Agwakọta Ngwa Ngwa Eji Emekọ Ihe
Mbọsị Ụka 25 Eprel 2021
Agwakọta Ngwa Ngwa Eji Emekọ Ihe N'ime obodo Xi'an nke mere eme, n'etiti etiti azụmaahịa na osimiri TaoHuaTan, oru ngo a bụghị naanị ijikọ ihe gara aga na ugbu a kamakwa obodo na okike. N'ịbụ ndị akụkọ akụkọ Peach na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Peach sitere n'ike mmụọ nsọ, ọrụ a na-enye paradisiac ebe obibi na ebe ọrụ site n'inye mmekọrịta chiri anya na okike. Na omenaala China, ihe omuma nke mmiri ugwu (Shan Shui) nwere ihe di nkpa nke nmekorita di n'etiti mmadu na okike, ya mere site na iji ohere di omimi nke saịtị a, oru a na-enye uzo gosiputara ihe omuma nke Shu Shui n’obodo.
Njirimara Ụlọ Ọrụ
Satọdee 24 Eprel 2021
Njirimara Ụlọ Ọrụ "Ihe nkiri sinima, ahoy" bu okwu mkpuru okwu nke agba nke agba nke ihe nkiri Europe na Cuba. Ọ bụ akụkụ nke echiche gbadoro ụkwụ na njem dịka ụzọ ijikọ ọdịnala. Designkpụrụ ahụ mere ka njem ụgbọ mmiri si na Europe gaa Havana nwere fim. A kpaliri nkọwapụta akwụkwọ ịkpọ oku na tiketi maka ememme ahụ site na paspọtụ na paspọtụ njem nke ndị njem gafee ụwa taa. Echiche nke ịgagharị na fim na-agba ọha na eze ume ịdị na-anabata ma na-achọ ịmata mgbanwe mgbanwe ọdịnala.
Tọọzdee 22 Eprel 2021
Nri Nri Igbe onyinye "Nwere Fun Duck" bụ igbe onyinye pụrụ iche maka ndị na-eto eto. N'ike mmụọ site na ihe egwuregwu ụmụaka, egwuregwu na ihe nkiri, ihe ngosi a gosipụtara "obodo nri" maka ndị na-eto eto nwere ihe atụ na-atọ ụtọ ma zuru oke. A ga-etinye ihe oyiyi IP n'ime okporo ụzọ obodo ma ndị na-eto eto hụrụ egwuregwu, egwu, hip-hop na ihe ntụrụndụ ndị ọzọ n'anya. Na-enweta egwuregwu egwuregwu na-atọ ụtọ ka ị na-eri nri, kwupụta nwatakịrị, na-ekpori ndụ ma nwee obi ụtọ.
Marais Onyinye Onyinye Maka Achicha Satọdee 18 Septemba
Cliff House Obibi Izu Ụka Fraịdee 17 Septemba
Chongqing Zhongshuge Ebe A Na-Ere Akwụkwọ Tọọzdee 16 Septemba
Ọkụ Ihe Eji Eme Akwa Agwakọta Ngwa Ngwa Eji Emekọ Ihe Njirimara Ụlọ Ọrụ Oriọna Nri Nri